२०७८ साल असोज महिनामा कस्तो छ तपाईको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल – PathivaraOnline
Home > राशिफल > २०७८ साल असोज महिनामा कस्तो छ तपाईको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल
admin September 17, 2021 राशिफल 0
असोज महिनामा नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । वाहन लाभ हुने समय छ । जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । कुनै कुराले मनमा शान्ति छाउला । व्यापार व्यवसायमा औसत लाभ हुनेछ, तर मध्य महिनामा भने स्वास्थ्य प्रति सजगता अपनाउनु पर्नेछ । पुँजी बजारको लगानी पनि त्यति राम्रो नहोला ।
यो महिना समग्रमा सकारात्मक महिना रहेको छ । ठूला व्यक्तिले तपाइको मेहनतको प्रशंसा गर्नेछन् । कला र गलाको प्रभाव बढ्दै जानेछ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै सुखद् यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् । कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्नेछ । ब्यापार व्यवसायबाट आम्दानी हुनेछ ।
यो महिनामा मिश्रित फल मिल्नेछ । ताके अनुरूप काम नबन्नाले दिक्क लाग्न सक्छ । घर परिवारमा झैझमेलाको अवस्था आउला । नियमित खर्चसमेत बढ्ने योग छ । महिनाको उत्तरार्धबाट ठीक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता पनि मिल्नेछ ।
असोज महिनामा नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुनेछ । शुभ समाचार सुन्न पाइएला । ठूला व्यक्तिले तपाइको मेहनतको प्रशंसा गर्नेछन् । कला र गलाको प्रभाव बढ्नेछ । महिनाको अन्त्यबाट राजनैतिक कार्यमा बाधा आउनेछ । स्वास्थ्यमा तथा सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ ।
असोज महिनामा नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका मिल्नेछ । शुभारम्भको चर्चा चल्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिको भेटघाटले मन प्रसन्न हुनेछ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ ।
असोज महिनामा जोश, जाँगर र हिम्मत बढ्ला । कुटुम्बबाट विशेष सहयोग मिल्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग प्राप्त हुनेछ । नयाँ लगानी र आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ र व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ । राजनैतिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । वैदेशिक यात्राको योग पनि बन्नेछ ।
यो महिनामा नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन मुस्किल पर्ला । पढाइ लेखाइमा पनि प्रगति गर्न नसकिने देखिन्छ । कार्य क्षेत्रमा सजग रहनु उचित हुने देखिन्छ । मध्य महिनामा वैदेशिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । घर, जग्गा खरिद बिक्रीको योग छ । सफल यात्रा पनि हुन सक्छ ।
असोज महिनामा सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्नुका साथै कला साहित्यका क्षेत्रमा विशेष लगाव रहनेछ । इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने भएको छ । रमाइलो भेटघाट हुनेछ । मुद्दा मामिलामा सफलता पाइनेछ । महिनाको अन्त्यमा नजिकका व्यक्तिबाट कार्यमा बाधा आउला । महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्नेछ ।
यो महिनामा लामो यात्रा सुखद् र सफल हुनेछ । चलाखीपूर्ण बोलीले कार्य सम्पादन हुन सक्छ । प्राविधिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । प्रेमसम्बन्ध र प्रणयप्रसङ्गका लागि पनि श्रेष्ठ समय छ । मध्य महिनाबाट आफ्नो विचार विपरित निर्णय हुनेछ । बाटो काट्दा वा यात्रा गर्दा सचेत हुनुपर्छ ।
असोज महिना राम्रो फल मिल्नेछ । कुनै कुराले मनमा शान्ति छाउनेछ । नजिकका व्यक्तिको सहयोगबाट कार्य पुरा हुनेछ । एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ । नयाँ पद, प्रतिष्ठा, वस्त्र र अलंकार प्राप्ति हुनेछ । वैदेशिक यात्राको योग पनि छ ।
असोज महिनामा त्यति राम्रो फल मिल्नेछैन अतः मिश्रित पहल मिल्नेछ । अरूको वचन टाल्न नसक्दा दुःख पाइनेछ र खर्च पनि हुनेछ । महिनाको मध्यबाट आफूले काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई बिस्तारै बढी लाभ हुनेछ ।
यो महिनामा मीन राशिका व्यक्तिहरूलाई स्थान परिवर्तनका विशेष योग देखिन्छन् । आजको श्रमबाट पछिलाई फाइदा पुग्न सक्छ । छरछिमेकमा सम्पन्न हुने धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु पर्नेछ । आत्मबल बढाएर काम गरेमा असफल भइँदैन । (अधिक जानकारीको लागि 977-9849559502)
पारश र हिमानीको छोरी पुर्णिकाले पहिलोपटक सार्वजनिक गरिन् यस्तो तस्बिर
कक्षा ६ मा पढ्ने यी दुई बालकको खातामा करोडौँ भारुआएपछि… यस्तो जे गरे झनै रोचक! !
०७५ चैत्र १८ गते सोमबार ई. सं. २०१९ अप्रिल ०१ तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य
०७८ साल असार १० गते बिहिबार, हेर्नुहोस् तपाईहरूको राशि अनुसारको भाग्यफल यस्तो छ !
०७७ साल माघ १६ गते शुक्रबार, हेर्नुहाेस तपाईहरूकाे राहिफल अनुसारकाे भाग्यफल
६ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि अपहरित बालकको सकुशल उद्धार
बारको बैठक हलभित्र छिरेका ऋषि धमलालाई बाहिर निकाल्नुकाे कारण खुल्यो (भिडियो सहित)
पोखरामा यस्तो अबस्थामा रङ्गेहात भेटिए तीन जना बालकहरु सहित विदेशी नागरिक !
यील२ तामाङ र मगर मिलेर घरअगाडी आँगनमा गरे यस्तो अपराध, छिमेकीले दिए बयान
७ बर्षे छोरीले “आमा पिसाब गर्ने ठाउँ दुख्यो”भनेपछि ! आमाले काम गर्ने घरमै छोरीको पटक-पटक बलात्कार भएको खुलाशा (भिडियो हेर्नुस)
०७८ कार्तिक ०९ गते मंगलबार, हेर्नुहोस् तपाईहरुको राशि अनुसारको भाग्यफल यस्तो छ...
नयाँ बसपार्क याैनबजारः रात परेसँगै प्रहरीकै अगाडि यस्तो बार्गेनिङ - भिडियोमै हेर्नुस्